ကလေးပေးသော အတွေး | သန်လျင်သား
Posted by မိုးနင်း at 10:16 PM
လောကကြီးမှာ ဒီလိုအသိရှိတဲ့ကလေးတွေ ရှိနေသလား
အခုထိတော့ မမြင်ဖူး မတွေးဖူးသေးဘူးဗျ
ဒီလို ကလေးမျိုးတွေသာ . . . ပညာသာကောင်းကောင်း သင်ရရင်ဖြင့် . . .
ဖြစ်ချင်တိုင်းလည်း မဖြစ်ဆိုတော့ဗျာ . . .
သူပေးတဲ့ အတွေးလေးကို ကျွန်တော်လည်း ဆင့်ပွားတွေးသွားပါတယ်
အမယ်.. ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က အကြောင်းကို စောင်းပြီး ရေးထားလေသလား... ပြောင်းပြန်ကြီးကို မှန်နေတော့တာပဲ...ဟီးးးးးးးးး။။
အဲလိုကလေးလေးတွေ ပြင်ပမှာ တကယ်ကို ရှိနေပါသေးတယ်လေ။။ ပြုစုပျိုးထောင် ပေးနိုင်ဖို့သာ လိုအပ်နေတာပါ။။ ကျောက်ကောင်းတို့မည်သည် သွေးတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီး အရောင်ထွက်ရတယ်မဟုတ်လား။။။